တရုတ်နိုင်ငံက ၂၀၂၂ ခုနှစ်စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကို စွမ်းဆောင်နိုင်ရန် ယုံကြည်မှု နှင့် လုပ်နိုင်စွမ်းများ ရှိဟုဆို - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ ရှိ Lujiazui နယ်မြေအတွင်း လမ်းပေါ်သွားလာနေသည့် မော်တော်ယာဉ်များအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် ယခုနှစ်၏ စီးပွားရေး နှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်များ စွမ်းဆောင်နိုင်ရန် ယုံကြည်မှု ၊ လုပ်နိုင်စွမ်းများ နှင့် အခြေအနေများ ရှိကြောင်း နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးစီမံချက်ရေးဆွဲသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။COVID-19 ကပ်ရောဂါ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ယာယီဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင်၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Zhao Chenxin က ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ဖြည်းဖြည်းခြင်း သိသာထင်ရှားလာသည့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်မှု ညှိနှိုင်းခြင်း၏ မူဝါဒ အကျိုးသက်ရောက်မှု တို့နှင့်အတူ တရုတ်စီးပွားရေးသည် ပုံမှန်လမ်းကြောင်း တစ်ခုသို့ မကြာမီပြန်လည် ရောက်ရှိသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူးချုပ် Zhao Chenxin က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက အခြေခိုင်နေသော မူဝါဒများ အကောင်အထည် ဖော်ရေးအား အရှိန်မြှင့်တင်ရန်အတွက် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ကျော်လွန်သော စိန်ခေါ်မှုများအား တက်ကြွစွာဖြေရှင်းရေး ၊ နောက်ထပ်မူဝါဒဆိုင်ရာယန္တရားအား စီစဉ်ရန် ၊ မူဝါဒညှိနှိုင်းမှုများအား မြှင့်တင်ရန် နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အခြေခံများအား တည်ငြိမ်စေရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
China has confidence, capabilities to achieve 2022 economic goals: official
BEIJING, May 1 (Xinhua) — China has the confidence, capabilities and conditions to achieve this year’s economic and social development goals, said an official with the country’s top economic planner.
The impact of the COVID-19 pandemic is temporary, said Zhao Chenxin, secretary-general of the National Development and Reform Commission.
Zhao expected that the Chinese economy will soon return toanormal track with the policy effect of coordinating COVID-19 control and economic development gradually emerging.
The official called for accelerating the implementation of established policies.
Efforts should be made to actively address changes exceeding expectations, plan additional policy tools, and enhance policy adjustments, to stabilize China’s economic fundamentals, Zhao said. ■
Photo – Photo taken on Sept. 30, 2020 shows the street view of the Lujiazui area of Pudong, east China’s Shanghai. (Xinhua/Wang Xiang)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြန်လည်နလန်ထူရန်အတွက် အရေးပါသော မောင်းနှင်အားဖြစ်ဟု ထိုင်းကျွမ်းကျင်သူပြောကြား